ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုး Shacha TechnoForge Pvt ။ Ltd.
တွင် Shacha Technoforge, ဤတန်ဖိုးသုံးခုသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်တကယ်အရေးကြီးသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ရောင်းချသူများ,0န်ထမ်းများနှင့်ပေးသွင်းသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ဆက်သွယ်ခဲ့ပုံကိုဤတန်ဖိုးများမှလှုံ့ဆော်ပေးသည်.
ရိုးသားမှုသည် Shacha Technoforge အတွက်အဓိကတန်ဖိုးဖြစ်သည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနှင့်အတူရိုးသားစွာရိုးသားသည်. ကျနော်တို့လည်းအနာဂတ်၌ရိုးသားဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်တန်းတူတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏0န်ထမ်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်. တွင် Shacha, ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်ခွင်သို့ဖြည့်ဆည်းရန်နှင့်လုံခြုံမှုရှိစေရန်ကတိက0တ်ပြုထားသည်.